Andry Rajoelina Hanao fanambarana lehibe
Omaly alahady 11 febroary tamin’ny mitataovovonana no tafaverina indray teto Madagasikara ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina, nitsena azy teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivato ireo mpikambana Mapar sy mpiara-miasa akaiky aminy notarihan-dry Razanamahasoa Christine, Brunel Razafitsiandraofa ary Pierre Houlder.
Misy ny fotoana nanginana, tonga kosa ny fotoana hitenenana, hoy i Andry Rajoelina tamin’ny tafa fohy nifanaovany tamin’ny mpanao gazety. Raha variana nandrombaka sy nanangona fahefana ny hafa tao anatin’ny efa-taona, dia nikaroka izay hanarenana an’i Madagasikara kosa izahay, hoy izy. Milaza ny hanao fanambarana goavana ho an’ny Malagasy ny alahady 18 febroary izao i Andry Rajoelina, izay nolazainy fa alefa mivantana amin’ny haino aman-jery. Heverin’ireo mpanara-baovao politika fa fotoana hanambarany amin’ny fomba ofisialy ny maha kandida azy amin’ny fifidianana filoham-pirenena io fotoana io raha tsy hoe misy fiovana lehibe tampoka. Efa mazava ny serasera nampiasainy fa fiomanana amin’io fifidianana ho avy io, ny olon’ny Mapar rahateo manomboka efa mifanentana sy mihetsiketsika etsy sy eroa amin’izao fotoana.